Okwukwe na Works
[Genuine faith produces good works.] Ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị na-enweghị [ezigbo] uwe na-enweghị [ezuru] nri ụbọchị ọ bụla, na otu onye nke unu na-ekwu na ha, "Gaa n'udo [na ngọzi m], [na-] ekpo ọkụ na-oriri onwe unu,"Ma ọ dịghị enye ha ihe na-akpa ahụ, ihe ọma na-eme?
Gịnị bụ ọrụ ọma?
N'ihi na m na agụụ na-agụ, na i nyere Me ihe ka ha rie; Akpiri kpọrọm nku, na i nyere m ihe ọṅụṅụ; M ọbịa, na na ị kpọrọ Me na; M gba ọtọ, ị uwe Me; [na] Ahụ rịaburu m, na ị gara Me (na enyemaka).
My ndụ dị ka nke taa.
Ana m arịa ọrịa na M nwere ike na-arụ ọrụ.
The ọrịa pụrụ ịgwọ.
M enweghị nkà mmụta ọgwụ.
M enweghị ego.
M na-ehi ụra na n'okporo ámá.
M enweghị ezinụlọ.
M na-enweghị olileanya.
na nkwado, Na m pụrụ ibi n'ime na M nwere ike na-amalite na-arụ ọrụ. Without support, I will die. Na ihe ego ma ọ bụ na nkwado, M nwere ike-agwọ. Ị nwere ike inye nri na ahụ ike.
Categories Ma hogan anyị, nna m, Ndụ m Tags Enweghị Ebe Obibi, enweghị olileanya, Poverty post igodo